Ihe omuma ihe omuma Olee ihe nzacha Spam
Artem Abgarian, Semalt Onye nchịkwa, na-ekwu na nzacha spam nwere ike imebi ndị ahịa ọbụna ma ọ bụrụ na ha nwere ikikere na akwụkwọ ederede na ndị ọrụ njedebe na-abanye. Na-eme mgbe a na-akpọ ozi email ziri ezi dị ka spam "ụgha dị mma." N'ọtụtụ ọnọdụ, ọnọdụ dị otú a na-eme mgbe ndị nnata anaghị eji isi ISP dị ka Yahoo, Google, Hotmail, na AOL.
Ndị ISP buru ibu ejiriwo nzacha spam ha kwadoro na njirimara onye ọrụ mgbe obere ulo oru na - eji nzacha spam azụmahịa. Ndị nzacha spam azụmahịa na-arụ ọrụ na ọkwa atọ: nzacha ozi ịntanetị tupu ha eruo nkesa ahụ, nzaa ozi ịntanetị mgbe ha ruru na nkesa na n'ikpeazụ nzacha ozi na desktọọpụ onye ọrụ.
Ndị nzacha a na-agbanweta ozi mail iji chọpụta spam. Mgbe ozi gị ruru nchịkọta, a na-enyocha ya gbasara njirisi ndị a: okwu na ahịrịokwu, ogo foto, njikọ, wdg. N'akụkụ a, o doro anya na ndị ahịa chọrọ ịma okwu na ahịrịokwu ndị na-akpalite nzacha spam ma gbalịa izere ha . Imirikiti ndị mmepe nke nzacha email anaghị ekerịta ozi a, ha nzacha na-agbanwe agbanwe iji zaghachi omume nke spam ugbu a. Otú ọ dị, ndị na-enye dịka onye omempụ Spam na-egosipụta ụfọdụ ozi na-enye aka nwere ike ịbịaru aka ma ọ bụrụ na ịnweghị ka ozi gị dị ka spam. A na-emezi nzacha Email na oge niile iji hụ na spam agaghị abanye na igbe mbata.
Ụfọdụ ụlọ ahịa na-eji ihe nzacha na-elekwasị anya na nkụnye eji isi mee na aha onye ezigara ya. Ha na-amụọ ọnụọgụ ole ndị nnata gụrụ akwụkwọ ozi gị dị ka spam. Nhọrọ ndị ọzọ na-agbalị ịchọpụta ma ọ bụrụ na ozi-e ezigara ndị ọrụ bụ ọrụ metụtara ma ọ bụ..A na-eziga email na-adaghị ule ka ọ bụrụ ụda.
Ụfọdụ nchịkọta na-adabere nanị na ndị ọrụ njedebe. Ọ bụrụ na ndị ọrụ anabata ozi gị na igbe mbata ha, ịnwere ike ịhapụ izigara ha ozi n'enweghị nchegbu maka nzacha spam. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ịnweta ikikere nke ndị ọrụ njedebe na-egbochi nzacha spam site na iziga ozi gị na folda spam.
Atụmatụ maka otu esi zere ịbụ akara dị ka spam:
Zere ozi imel niile
Ozi ịntanetị na ihe oyiyi na-ele anya mara mma, mana ọ bụghị nzacha spam . N'ụzọ dị iche na nke ahụ, n'eziokwu, nzacha spam ghọtara ozi ndị dị ka ndị na-enyo enyo. Ya mere, na-enyocha ihe oyiyi gị mgbe niile maka ederede ederede, n'ihi na ederede na-ezighi ezi nwere ike izipu email gị na spam.
Gbanyụọ mkpụrụ okwu mgbaàmà, na ntụpọ
Okwu dịka mmekọahụ, n'efu, inye, kpọọ ugbu a, Viagra ma 'zụta ugbu a' na-eme ka nzacha spam dị ngwa.
Jiri mkpụrụedemede ukwu
Ọtụtụ mkpụrụ akwụkwọ isi na akara okwu gị nwere ike ịmepụta nzacha iji kọwaa ozi gị dika spam. Ọzọkwa, dozie isiokwu ahụ kpọmkwem ma kwụ ọtọ.
Zere ihe mgbakwunye
A na-ejikarị ihe mgbakwunye mee ihe maka nzube ọjọọ, ya mere, ozi na Mgbakwụnye nwere ohere dị elu ka akara dị ka spam site nzacha. Nke a bụkwa n'ihi na ụfọdụ nzacha enweghị ike iṅomi mbido maka faịlụ obi.
N'ikpeazụ, zere izipu njikọ na-eduga ndị na-agụ ya na ibe nwere ihe ọ bụla ma e wezụga ihe oyiyi. Kwe ka njikọ jikọta na peeji nke ziri ezi. Iji zere nsogbu, cheta iziga ozi naanị ndị debanyere aha gị Source .